अर्चना पनेरुको विवाह गरेको केही महिनामै सम्बन्ध टोडियो? – mero sathi tv
अर्चना पनेरुको विवाह गरेको केही महिनामै सम्बन्ध टोडियो?
On २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १७:१३
नेपालकि ‘पोर्नस्टार’ भनेर चिनिने नायिका अर्चना पनेरु एक पल्ट खुबै चर्चामा अाईन् । जसरी अाईन् त्यसरिनै खहरे बनेर गईन् । उनको क्रेज चाडै एक निर्देशकले चलचित्र पनि खेलाए तर चलचित्रले सफलअता भने पाएन । उनी पछिल्लो समय गुमनाम नै भइन् । केहिदिन अघि उनी एक विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा छाईन् ।
अर्चनाले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गरेर ‘विवाह’को फोटो राखेकी थिईन् र त्यसमा उनले ‘जस्ट म्यारिड’ भनेर ह्यासट्याग पनि राखिन । साथै अर्को पोष्टमा उनले ‘तिमी जस्तो जीवनसाथी पाउनु मेरो भाग्य हो’ भनेर पनि लेखेकी थिईन् ।
फोटोमा थुप्रैले कमेन्ट गरेर बधाई दिएका पनि दिए । अर्चनाकी आमा सुनीता पनेरुले पनि ‘प्रफेक्ट कपल’ भनेर कमेन्ट गरेकी थिईन् ।
तर उनले अप्रिल १ का दिन फेसबुकमा फोटो राख्दै लेखेकी छिन्, ‘त्यो बिवाह नभएर भ्यालेनटाईन डे को फोटो शुट थियो र मैलेमान्छेहरुको प्रतिकृया बुझ्न गलत समाचार सम्प्रेषण गरेकी थिए र मैले विवाह गरेकी छैन । त्यो गलत समाचार हो । त्यसका लागि आइम सरी’ ।